Xarunta Xubinta - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Gal si aad u hesho dukumiintiyada qorshaha, cusbooneysii cinwaankaaga, iyo hubi xaaladda sheegashooyinka iyo codsiyada oggolaanshaha hore.
Soo Gelitaanka XariirkaSaxiix Xariir
Hal meel ku hay caafimaadkaaga
Xarunta xubnaha CHPW ayaa ah xudunta ugu weyn ee dhammaan baahiyahaaga daryeelka caafimaadka. Hel dhakhtar, daabac kaarka aqoonsiga, baro sida loo cusboonaysiiyo caymiskaaga, oo baro dheefahaga. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, Aan ogaano.
Daabac Kaarkaaga Aqoonsiga
Ma u baahan tahay inaad daabacdo kaarkaaga xubinimada CHPW? Waanu kaa daboolnay.
Kaadhkayga daabac ➜
Raadi liistada buuxda ee waxtarrada qorshaha CHPW iyo macluumaadka ku saabsan sida loo adeegsado.
Eeg buug-gacmeedka xubinta ➜
Baro Xarumaheena Caafimaadka Bulshada oo baro sida ay kuugu adeegaan.
Waxbadan ka baro CHC-yadayada ➜
Kheyraadka xubnaha ugu caansan
Waxbadan ka baro dheefahaaga
Waxbadan ka baro barnaamijyadeenna Faa'iidooyinka + abaalmarinta
Raadi adeeg bixiye, isbitaal, rug caafimaad, ama farmashiye
Raadi liiskayaga daawooyinka la daboolay
Raadi taageero caafimaad hab dhaqan
Raadi adeegyo ku saleysan bulshada
Qorshe iyo Daboolis
Baro wax badan oo ku saabsan adeegyada iyo barnaamijyada lagu daboolay caymiskaaga CHPW.
Eeg muuqaalka guud ee qorshahaaga ➜
Diirada saar caafimaadka qoyskaaga oo dhan adiga $ 0 faa'iidooyinka iyo abaalmarinta.
Raadi farmashiye, hel 90-maalmood oo dawo-qoritaan ah, oo daawooyinka laguu soo diri doono.
Eeg faa iidooyinka daroogada ➜
U adeegso qalabkeena raadinta adeeg bixiyaha si aad u hesho dhakhaatiir iyo takhasusleyaal kuu dhow.
Raadi dhakhtar ➜
Uma baahnid gudbin si aad u aragto bixiyaha daryeelka caafimaadka dhimirka.
Aad xarunta caafimaadka hab dhaqanka ➜
Maamulayaasha kiisaska CHPW waxay kugula xiriiri karaan tababarka shaqada ee deegaanka, caawinta guryaha, iyo caawimaad kale.
Waxaan kaa caawin karnaa inaad la socotid daawooyin badan oo aad duljoogtid xaaladaha joogtada ah.
Xubnaheenna Su'aalaha la Weydiiyo waxay leeyihiin jawaabaha arrimo badan oo welwel iyo walaac ah.
Jawaabo raadi ➜
Xubnaha Apple Health waa inay cusbooneysiiyaan sannad kasta si ay u sii hayaan caymiskooda.
Cusboonaysii hadda ➜
Daryeel loogu talagalay adiga
Baahidaada caafimaad way ka duwanaan kartaa deriskaaga '. Marka aan nahay 'CHPW', waxaan ku dhejin doonnaa xarunta daryeelkaaga waxaanna dhiseynaa koox bixiyeyaal daryeel caafimaad adiga keliya ah.
Hooyooyinka, carruurta, iyo qoysaska
CHPW ayaa halkan loogu talagalay qoyskaaga. Hubso inaad wax ka ogtahay kaararka hadiyadaha aan bixino marka aad jadwal u sameyso baaritaanno muhiim ah.
Tag ChildFirst rst abaal marin ➜
Ogow xuquuqda aad u leedahay asturnaanta caafimaadka, iyo inaad ka hesho ka-guuridda daryeelka ku-meelgaarka ah una wareegto nolosha madax-bannaan
U tag ilaha dhalinyarada ➜
Sharci iyo asturnaan
Wax ka baro xuquuqdaada asturnaanta, sida CHPW ay ula socoto horumarinteenna, iyo waxa aad sameyn karto haddii si aan caddaalad ahayn laguula dhaqmay.
Oggolaanshaha iyo Maareynta Kahor Isticmaalka
Cabashooyinka iyo Racfaanada
Raacitaanka ballamaha caafimaadka, xubinnimada jimicsiga, iyo gunnada alaabada OTC ayaa ah qaar ka mid ah faa'iidooyinkeenna u-qalmitaanka Medicare-Apple Health.
Eeg faa iidooyin dheeri ah ➜
La kulan Xiriiriyaha Qabiilka, xubinta Cherokee Nation Natalie Christopherson, oo wax ka baro xulashooyinkaaga daryeelka.
Naafonimo iyo xanuun joogto ah
Laga soo bilaabo caawinta maaraynta jirro raagtay ilaa daryeel muddo dheer ah, waxaan halkan u joognaa inaan kuu sameyno qorshe adiga kuu shaqeynaya.
Xubnaha CHPW waxay xaq u leeyihiin qalliinka xaqiijinaya jinsiga iyo faa'iidooyinka kale.
Waa caadi in su'aalo la qabo - waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno! Jawaabaha adigu raadso
waxay raadinayaan xubintayada su'aalaha badanaa la isweydiiyo.